Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta amadolobha kakhulu kunasemaphandleni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Ukuguquka kwesimo sezulu, Amagagasi okushisa
Ukuguquka kwesimo sezulu kunemiphumela ehlukene ezindaweni ezahlukene. Imvamisa lolu shintsho emiphumeleni luyehluka ngesilinganiso esikhulu noma ngobude / nobubanzi emhlabeni. Ngokuvamile, ukuguquka kwesimo sezulu kunomphumela wamazinga okushisa akhulayo, kodwa lokhu kwanda ngeke kufane kuzo zonke izindawo.
Ngokusho kocwaningo, ukwanda kwamazinga okushisa kuzothinta amadolobha kakhulu kunezindawo zemvelo nokuthi, uma izinga lamanje lokwenyuka liqhubeka, umthelela wamaza okushisa emadolobheni ungaphindeka kane. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngalolu cwaningo?
1 Umphumela wamazinga okushisa akhuphukayo
2 Imiphumela yokushisa komhlaba emadolobheni
3 Ikusasa elilandelayo
Umphumela wamazinga okushisa akhuphukayo
Ucwaningo lokuthi amazinga okushisa azowathinta kanjani amadolobha nezindawo zemvelo lwenziwe yiYunivesithi yaseLeuven (eBelgium) futhi babe neziphetho eziqinile abazethule emhlanganweni obanjwe yi-European Geosciences Union eVienna.
Omunye wababhali abakhulu bocwaningo ngamazinga okushisa abiziwe U-Hendrik uyakhala ibike ukuthi imiphumela emibi yokuguquka kwesimo sezulu maqondana namazinga okushisa izokuba mibi ngokuphindwe kabili emadolobheni kunasezindaweni zemvelo.
Kuyaziwa vele ocwaningweni olwedlule ukuthi umphumela wamazinga okushisa aphezulu mkhulu emadolobheni kunasezindaweni zasemakhaya. Ikakhulukazi ebusuku kunomphumela "wesiqhingi esishisayo", okungukunyuka komoya oshisayo obhajwe ebusweni bezindlela zomgwaqo ne-asphalt okubanga ukwanda kwamazinga okushisa. Yini eyenza lolu cwaningo lube nezinguquko ukwenza amanani okokuqala ngqa ukuthi amadolobha azoba namazinga okushisa aphakeme kangakanani.
Imiphumela yokushisa komhlaba emadolobheni
Kunezifundo ezibonisa ukuthi amagagasi okushisa ayanda emadolobheni, kokubili ngobuningi nangokuqina. Ngokushisa okukhulu, ukwamukelwa esibhedlela ngenxa yokwanda kokuphela kwamanzi emzimbeni, umkhiqizo uyancipha, ukonakala kwengqalasizinda kuyenyuka futhi ezimweni ezimbi kakhulu, amacala okufa ayanda.
Kulolu cwaningo, abacwaningi benze ucwaningo lokuthi imiphumela yamaza okushisa ahlangana kanjani emadolobheni nasezindaweni zemvelo. Kulokhu, basebenzise izilinganiso zokushisa kusuka eminyakeni engama-35 edlule eBelgium futhi bayiqhathanisa nobuningi namandla umfutho wokushisa weqiwe ngawo. Le mikhawulo imaka umonakalo odalekile empilweni nakukho konke okushiwo ngenhla.
Ngenxa yalokhu, kungabonakala ukuthi phakathi nesikhathi esacwaningwa amaza okushisa abelokhu enamandla kakhulu emadolobheni kunasemaphandleni. Lokhu kulindeleke ukuthi kube kubi kakhulu ngokuzayo.
Lapho sebethole iziphetho zophenyo, bazinikele ekwenzeni izilinganiso ngalokho okuzokwenzeka ngokuzayo. Izilinganiso zisuselwa ekulingiseni okwenziwe ngamamodeli akhiqizwe ngekhompyutha. Lezi zilinganiso zibona ukuthi esikhathini esingama-2041-2075 umthelela wokushisa emadolobheni lizakuphindeka kane kunensimu.
Abacwaningi bacacisa ukuthi lezi zilinganiso zihambelana nesimo esiphakathi futhi bayaqaphela ukuthi kunezinto eziningi ezingathinta ukubalwa, njengokuncipha okukhulu kokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa emkhathini noma ukuma ekukhuleni kwamadolobha.
Isimo esibi kakhulu samaza okushisa okukhulu kungaba ukwanda amazinga wokuxwayisa afike kuma-degree ayi-10 futhi angahlala izinsuku ezingama-25 ehlobo. Kodwa-ke, uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kungancishiswa, bekuzofana nanamuhla.
Ngakho konke lokhu, kwenziwa umzamo wokubhekisa esidingweni esikhona sokuthi amadolobha akhe kabusha isakhiwo nokuphathwa kwawo ngokuya ngokuguquka kwesimo sezulu. Isibonelo, ngomklamo wedolobha omile, kunciphisa ukukhishwa kwegesi yokushisa noma ukusebenzisa ingqalasizinda engcolisa kancane. Yizinkombandlela zokunciphisa imiphumela yamagagasi okushisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Ukuguquka kwesimo sezulu kuzothinta amadolobha kakhulu kunasemaphandleni